ⓘ ကားလို့စ် စလင်းမ်
ကားလို့စ် စလင်းမ် ဆိုသောနာမည်သည် စပိန်နာမည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖေနာမည်မှ စလင်းမ် ကို ယူသုံးထားပြီး၊ အမေနာမည်မှ ဟဲလိုး ကို ယူသုံးထားသည်။ တဲလ်မက်စ်၊ အမေရိကန် မိုဗဲလ် ၏ စီအီးအို နှင့် အကြီးအကဲ ဖြစ်သော ကားလို့စ် စလင်းမ် ဟဲလူး (Spanish pronunciation: ကို ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ မက္ကဆီကန် လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ရုံသာမက ပရဟိတဒါနရှင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
1. ကားလို့စ်၏ ငယ်ဘဝ
စလင်းမ်အား မက္ကဆီကို စီးတီးမြို့တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဂျူလီယန် စလင်းမ် ဟတ်ဒတ် Julián Slim Haddad မှာ ဆီးယီးယန်းလူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင် မက္ကဆီကို မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ဂျူလီယန်သည် စပိန်ဘာသာလည်းတတ်ကျွမ်းခြင်း မရှိသောကြောင့် တစ်ဦးတည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
သူသည် အော်တမန် အင်ပါယာ ခေတ် စစ်သားများစုဆောင်းချိန်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကားလို့စ် စလင်းမ် ၏အမေ ဖြစ်သူ လင်ဒါ ဟဲလူးကို ဟိုဆေး ဟဲလူး José Helú နှင့် ဝဒီဟာ အတ်တာ Wadiha Atta တို့မှ ချီဟွာဟွာ နိုင်ငံ ပါရယ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းမိဘနှစ်ဦးစလုံးမှာ လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှ မက္ကဆီကို သို့ ၁၉ ရာစု အကုန်တွင် ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်ကြသည်။ မက္ကဆီကိုရောက် လက်ဘနွန် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကြောင်း ပထမဆုံးရေးသားထားသော မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကို ၎င်းမိဘနှစ်ဦးမှ ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ဂျူလီယန်သည် ကုန်ခြောက်များရောင်းချသော လမ်းပြကြယ် အမည်ရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ မက္ကဆီကို မြို့လယ်ခေါင်တွင် အိမ် ခြံ မြေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် ပေးချေနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခု ဩဂုတ်လ တွင် ဂျူလီယန် စလင်းမ် နှင့် လင်ဒါ ဟဲလူးတို့ သည် မက္ကဆီကို စီးတီး တွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏သားသမီး ခြောက်ယောက်အနက် ကားလို့စ် သည်အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ကားလို့စ်၏ ဖခင် ဂျူလီယန်သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
2. စလင်းမ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
၂၀⁠၀၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ တွင် စလင်းမ်သည် ဝရမ်ဘူးဖတ် Warren Buffett ကိုကျော်၍ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံး ဘီလျှံနာ အဖြစ် စာရင်းဝင်သွားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေ ကွာခြားချက် မှာ စလင်းမ် ဒေါ်လာ ၅၃.၁ ဘီလီလျှံ နှင့် ဘူးဖတ် ၅၂.၄ ဘီလီလျှံ ဖြစ်သည်။ ဝေါစထရိ ဂျာနယ်၏အဆိုအရ စလင်းမ်သည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အနာဂတ်ဝါဒီ စာရေးဆရာ အလ်ဗင် တော်ဖလာ Alvin Toffler အား သူ၏ရေးသားချက်များမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။၂၀⁠၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စလင်းမ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စည်းစိမ်စုစုပေါင်းသည် ဘီလ်ဂိတ်ကို ကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
စလင်းမ်ပိုင်ဆိုင်သော စည်းစိမ်များသည် တစ်ရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာပြီး ဇူလိုင်လ ကုန်တွင်ပင် သူပိုင်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ ၏ တန်ဖိုးစုစုပေါင်းမှာ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၉ ဘီလီလျံ ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ဘီလ်ဂိတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီလျံ ရှိမည် ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၂၀⁠၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စလင်းမ် သည် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံး လူအဖြစ် ဖိုးဘီးစ် စာရင်း တွင် မှတ်တမ်းတင် ခံရသည်။ ၂၀⁠၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၊ ဖိုးဘီးစ်စာရင်းတွင် စလင်းမ် သည် ကမ္ဘာ့ တတိယ အချမ်းသာဆုံး လူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင် ခံရသည်။ "အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၁ မှာ ဝါရင်ဘတ်ဖက်Warren buffet နှင့် ဘီလ်ဂိတ် Bill Gates ဖြစ်ပြီး၊ အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၄ မှာ လောရစ် အလ်လစ်ဆင်Lawrence Ellison ဖြစ်သည်။
3. အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ
စလင်းမ်သည် မက္ကဆီကန် စတော့အိတ်ချိန်းမားကတ်၏ ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဖြစ်လည်း မက္ကဆီကန် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အသင်းကြီး၏ အကြီးအကဲသမ္မတ အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိနေသေးသည်။ ၎င်းသည် နယူးယောက် စတော့ အိတ်ချိန်း အုပ်ချူပ်ရေးကောင်စီ ၏လက်တင် အမေရိက ကော်မတီတွင် ပထမဆုံး သမ္မတ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အလ်ထရီရာ အဖွဲ့ Altria Group နှင့် အလ်ကာတယ် Alcatel Group တို့၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလ်ထရီရာ အဖွဲ့မတိုင်ခင်တွင် ဖီးလစ် မောရစ် Philip Morris ၌ ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ ၂၀⁠၀၆ ဧပြီလတွင် နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။)
လက်ရှိအချိန်တွင်မူ စလင်းမ်သည် ဖီးလစ်မောရစ် အင်တာနေရှင်နယ် Philip Morris International ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းလျှက် ရှိသည်။ ၂၀⁠၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ စလင်းမ်သည် အက်စ်ဘီစီ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ် ၎င်း၏ အချိန်အတော်များ⁠များကို ကမ္ဘာ့ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလှူငွေများ ရရှိရန် အသုံးချခဲ့သည်။ ထို အလှူငွေများအား အဓိကအားဖြင့် အခြေခံလိုအပ်ချက် များတည်ဆောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၁၉⁠၉၇ ခုနှစ်၊ Apple ကုမ္မဏီမှ အိုင်မက် လိုင်း iMac line နည်းပညာ ကိုမိတ်မဆက်ခင် အချိန်အနည်းငယ် အလိုတွင် တွင် စလင်းမ်သည် Apple ကုမ္မဏီ၏ စတော့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Apple ကုမ္ပဏီသည် ထိုနည်းပညာဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်အထိ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ ထိုးတက်သွားခဲ့သည်။ သူသည် ကြီးမားကျယ်ပြန့် လှစွာသော ကာဆိုGroup Carso မက္ကဆီကန် ငွေကြေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအား တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းကြီးမှ Sanborns မက္ကဆီကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ Mixup ဂီတ လုပ်ငန်း၊ Sears Mexico ၊ Cigatam၊ Condumex နှင့် Hotelero Hostam လုပ်ငန်း အုပ်စု တို့ အား တိုက်ရိုက် အုပ်ချူပ်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော်လည်း သွယ်ဝိုက်၍ ပက်သက်သော လုပ်ငန်း အနေဖြင့် CompUSA အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်း လည်းပါဝင်သည်။
၂၀⁠၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကာဆို အုပ်စု Grupo Carso မှ အပြင်းအထန် ရုန်းကန်နေရသည့် အခြေအနေ အား အဆုံးသတ်နိုင် ရန် CompUSA အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်း၏ စတိုး ၁၀၃ ခု အား ရောင်းချရမည် ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၈ နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင် ၎င်းသည် တစ်သက်တာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် အကြံပေး ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Teléfonos de Mexico, América Móvil, and Grupo Financiero Inbursa စသည့် လုပ်ငန်းအုပ်စုများ၏ ဥက္ကဋ္ဌ လည်း ဖြစ်သေးသည်။ စလင်းမ်သည် ဟွန်ဒါ ဖော်မြူလာ ဝမ်း အဖွဲ့ အားဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေသည်ဟု ပြောကြသည်။
4. သတင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုများ
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်တာကာလတွင် သူ၏ ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာ အဓိက América Móvil ကုပ္မဏီ မှ လက်တင် အမေရိက တစ်လျှောက်ရှိ ဆဲလ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ များအားဝယ်ယူပြီး စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ၊ ယခုတွင် ဒေသ၏ ဩဇာအာဏာရှိ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခု အဖြစ် လစဉ်ကြေးပေး သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း ရာချီ ဖြင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ စလင်းမ် သည် တစ်ချိန်တုန်းက အမ်အိုင်စီ အင်ကော်ပိုရေးရှင်း MCI Inc ကြီး၏ အများဆုံး ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူ ၁၃% ရှယ်ယာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀⁠၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ်မှ စလင်းမ်သည် MCI ရှိ သူ၏ ရှယ်ယာအားလုံးအား ဗေရီဇွန် Verizon ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ သို့ ရောင်းချလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
5. Impulsora del Desarrollo y el Empleo
သူသည် Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina IDEAL" လက်တင်အမေရိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အတွက် ကမကထပြုသူ” ဟု အကြမ်းဖျင်း အဓိပါပ္ပယ်ရသည့် မက္ကဆီကို အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ အား ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ၎င်း ကုမ္ပဏီသည် မူလက အခြေခံ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ တိုးတက်ရေးအတွက် အာရုံစိုက် လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် IDEAL သည် ရေနံတွင်းနက်များမှ ဓာတ်ဆီနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုန်ကြမ်းများ အား ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း များ လည်းဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်သည်။ ထပ်မံ၍ IDEAL သည် ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲသည့် စက်ရုံများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ နှင့် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်များ အဓိကအားဖြင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ တွင်လည်း ဆက်စပ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သေးသည်။ IDEAL ၏ အဓိက လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများမှာ Desarollo de America Latina SA de CV နှင့် Promotora del Desarollo de America Latina SA de CV.
စလင်းမ်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု သည် မက္ကဆီကိုရှိ နှစ်စဉ် စီးပွားရေး ထွက်ကုန် စုစုပေါင်း annual economic output ၏ ၅% နှင့် အကြမ်းဖျင်း ညီမျှသည်။ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ ဖော်ပြချက်အရ စလင်းမ်နှင့် ၎င်းမိသားစုမှ ပိုင်ဆိုင်သော Telmex လုပ်ငန်းသည် ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံး အသုံးစရိတ် ကုန်ကျမှု ၏ ၄၉.၁% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
7. နိုင်ငံ့ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
8. ရရှိခဲ့သော ဆုများ
Wikipedia: ကားလို့စ် စလင်းမ်